Maalinta: Juun 1, 2019
Kaalinta SOLOTÜRK ee Kayseri maanta waa at 15.00
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç, kooxda ciidamada qalabka sida ee caanka ah ee caanka ku ah dunida ee SOLOTÜRK'un show lama qaban karin sababao cimilo xun awgeed Sabtidii isla goobtii lagu dhawaaqay 15.00'de. madaxa [More ...]
Wadada Jasiiradda Ankara
Xafiiska Gobolka Ankara, ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in cufnaanta taraafikada ay kordhin doonto inta lagu gudajiro bisha Ramadaan ee ciidaha ciida iyo isticmaaleyaasha wadooyinka in ay si nabad ah u safraan si loo hubiyo in dhismaha wadooyinka ay sheegeen in la hakiyey. "Traffic [More ...]
Kulan ayaa waxaa lagu qabtay TCDD iyo Iran Railways RAI iyo RAJA si ay uga wada shaqeeyaan dhinacyada gaadiidka iyo rakaabka. Kulanka waxaa lagu qabtay 29-30 bishii May [More ...]
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa shaaca ka qaaday in jidadka waaweyn iyo buundooyinka ay maamusho Agaasinka Guud ee Wadooyinka (KGM) ay bilaash noqon doonaan ilaa 10 June. Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, Ramazan [More ...]
Samsun-Batumi Tareenka si Gain Speed
Khadka tareenka Samsun Sarp, taas oo muhiim u ah gobolka Badda Badda, waa in la fuliyaa. Rize noqon doontaa saldhigga mustaqbalka istaraatiijiga ah ee Turkey. Madaarka ayaa la dhisi karaa halkan, [More ...]
III diiradda saaraya nidaamka tareenka. Kulanka Caalamiga ah ee Metrorail ayaa isku keena go'aan qaadayaasha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. TCDD Taageerada Guud ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, KGM, AYGM [More ...]
Gaadiidka bilaashka ah ee Jamaacada Bayramda ee Kocaeli
Gebze Fatih - Saldhigga Cayirova
Dawlada Hoose ee Kobanheegan, waxay sii waddaa inay shaqeyso fududeynta gaadiidka muwaadiniinta. Xogtan oo kale 2019 waxaa la furay bishii Maarso ee Gebze - Halkalı Kooxda D-100 ee muwaadiniinta Gebze Fatih iyo Cayirova xarumaha tareennada ee xaafadaha magaalada [More ...]
Gebze Halkalı Marmaray Line Ticket Fee Arday Dheer: Gebze Halkalı Marmaray Istanbulkart sax ah iyo tikidhada hal-tigidhku waa 5 TL. Baaskii ugu horreeyay ee buuxa ee loo yaqaan '2.60 TL student' oo leh Istanbulkart [More ...]
Khadka Isgaarsiinta TCDD 444 8 233: Waad u wici kartaa khadka isgaarsiinta TCDD si aad u hesho macluumaad ku saabsan waqtiyada tareenka, tigidhada tareenka iyo isbeddelada tigidhada. U wac lambarka taleefanka TCDD tareenka [More ...]
Ka baaqashada Saacadaha Marmaray waxay u dhigantaa Habeenkii
Halkalı-Gebze Marmaray ayaa joojiya saacadaha habeenkii. Saraakiisha Marmaray waxay sameeyeen bayaan rasmi ah, rakaabyo badan oo ka shaqeeya xarumaha idaacadda ee saacadaha lagu tilmaamey in aysan dib u heli karin lacagtoodii, dibadbax ay ku muujinayaan xaaladda. Ka dib laba saacadood [More ...]